WINDOWS 10 CUSBOONAYSII KB4338819 (OS DHIS 17134.165) BEDDEL FAAHFAAHINTA LOG - JILICSAN
Windows 10 cusboonaysii KB4338819 (OS dhis 17134.165) beddel faahfaahinta log
Markii u dambaysay ee la cusbooneysiiyay Abriil 17, 2022 0
Microsoft waxay soo saartaa cusbooneysiinta amniga alaabada shirkadda Talaadada labaad ee bil kasta. Oo maanta iyada oo qayb ka ah balastar Talaadada cusboonaysiinta Microsoft ayaa sii daayay Windows 10 Dhis 17134.165 oo leh isugeyn cusbooneysii KB4338819 Qalabka ku shaqeeya Windows 10 nooca 1803 (cusboonaysiinta Abriil 2018). Sida laga soo xigtay shirkadu, update this KB4338819 kuma jiraan sifooyin cusub Windows 10 nooca 1803, waa uun cusboonaysiinta hagaajinta cayayaanka iyo hagaajinta xasilloonida.
Maxaa ku cusub Windows 10 dhis 17134.165
The Cusbooneysii KB4338819 waxaa ku jira cusboonaysiinta amniga ee Internet Explorer, Windows Apps, shabakadaha Windows Datacenter, shabakadaha wireless-ka ee Windows, Windows virtualization, kernels Windows, iyo adeegayaasha Windows.
Sidoo kale, Microsoft ayaa ugu dambeyntii u oggolaanaysa isticmaalayaasha inay ka saaraan macluumaadka WebView ee barnaamijyada UWP. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad ka soo dejiso Microsoft Edge DevTools Preview app ka Dukaanka oo aad karti u geliso aaladda cilladaha. The Cusbooneysii KB4338819 waxay hubin doontaa in arjiga iyo aaladda ay ku habboon yihiin dhammaan cusbooneysiinta Windows.
Cusboonaysiinta KB4338819 waxay wanaajisaa Universal CRT Ctype waxayna si sax ah u maamuli doontaa EOF sidii talobixin ansax ah. Waxayna ka hadlaysaa arrin sababi karta in kordhinta dhinaca macmiilka ee Kooxda Xulashada Yaraynta ay fashilanto si lama filaan ah.
Windows 10 cusboonaysii KB4338819 Hagaajinta iyo hagaajinta
Microsoft ayaa ku dhawaaqday KB4338819 gudaha Goobta taageerada Windows , waxaana loo tixraacaa Julaay 10, 2018—KB4338819 ( Dhismaha OS 17134.165 ). Haddii aad hore ugu shaqaynaysay Windows 10 nooca 1803 ee kombayutarkaga, cusboonaysiintani waxay wax ka qaban doontaa dhibaatooyinkan:
Waxay wanaajisaa awoodda Universal CRT Ctype qoyska ee hawlaha si ay si sax ah ugu qabtaan EOF sidii talobixin sax ah.
Wuxuu sahla ciribtirka macluumaadka WebView ee abka UWP iyadoo la adeegsanayo Microsoft Edge DevTools Preview app kaas oo laga heli karo Dukaanka Microsoft.
Wuxuu wax ka qabtaa arrin sababi karta in kordhinta dhinaca macmiilka ee Kooxda Xulashada Yaraynta ay fashilmaan inta lagu jiro habaynta GPO. Fariinta khaladka ah waa Windows ku guul darreystay in ay dabaqdo Settings MitigationOptions. Hababka yaraynta Options waxay yeelan karaan gal gal u gaar ah ama Hab-socodka GPOList: Extension MitigationOptions soo celiyay 0xea. Arrintani waxay dhacdaa marka Xulashooyinka Yaraynta lagu qeexo gacanta ama Siyaasadda Kooxda ee mashiinka iyadoo la adeegsanayo Xarunta Amniga Difaaca Windows ama PowerShell Set-ProcessMitigation cmdlet.
Wuxuu qiimeeyaa nidaamka deegaanka ee Windows si uu u caawiyo hubinta ku habboonaanta arjiga iyo aaladda dhammaan cusbooneysiinta Windows.
Cusboonaysiinta amniga ee Internet Explorer, abka Windows, sawirada Windows, isku xidhka datacenter Windows, Windows wireless network, Windows virtualization, Windows kernel, iyo Windows Server.
Soo deji Windows 10 Dhis 17134.165
Kii ugu dambeeyay KB4338819 Cusboonaysiinta ayaa si toos ah u soo dejisan doonta oo ku rakibi doonta windows update. Ama waxaad gacanta ku hubin kartaa wixii cusbooneed ee goobaha -> update and security -> windows update.
Sidoo kale Akhri: Hagaaji cusbooneysiinta isugeynta ee windows 10 nooca 1803 ee nidaamka x64 ku saleysan (KB4338819) ayaa ku guuldareystay in la rakibo.
Sidoo kale, waad soo dejisan kartaa Windows 10 KB4338819 Cusbooneysii xirmo gooni-gooni ah oo ka yimid bogga cusboonaysiinta Microsoft.
Windows 10 KB4338819 Cusbooneysii 32 bit (374.1 MB)
Windows 10 KB4338819 Cusbooneysii 64 bit (676.6 MB)
Ku rakibida KB4338819 cusboonaysiinta keenaysa Windows 10 nooca 1803 ee OS Build 17134.165. Si aad u hubiso nooca Windows 10 oo aad u dhisto lambarka taabo windows + R, ku qor guulaysta iyo ok. Tani waxay soo bandhigi doontaa shaashad sida sawirka hoose.
Sidoo kale Akhri Windows 10 Cusbooneysii KB4338825 OS Dhis 16299.547 (10.0.16299.547) Beddel nooca log 1709.